Iingcebiso ezili-10 eziphezulu malunga nendlela yokufumana ezininzi zeWebhu Hits - I-Semalt Advice
Enye yeendlela iindlela zokuqhubela phambili kwi-intanethi zingaphumelela ngokuqhuba umzila oninzi kwisayithi kunokwenzeka. Lezi ngcebiso ezilishumi ezichazwe nguMax Bell, uMphathi weNtengo kaMthengi we-8 (Semalt , kufuneka ukwandise i-traffic yakho jikelele kunye ne-hits website.
# 1. Hambisa iwebhusayithi kwiziko elinesithathu eziphezulu zokukhangela injini . Ziyi-Google, iBing, kunye ne-Yahoo (ngoku i-Bing esuka kwi-Microsoft). Ngale ndlela, abantu baya kufumana ulwazi lenkampani xa benza ukukhangela kwabo.
# 2. Yakha iividiyo eziphezulu kwaye uzithumele kwiwebhusayithi yekwabelana ngevidiyo. Qinisekisa ukuba ufake i-URL yakho ekuqaleni nasekupheleni kwevidiyo, kwakunye nakwindawo yokuchaza. Iividiyo ezifundisayo zifumana abantu abaninzi ukutyelela indawo.
# 3. Yabelana nge-URL yewebhu kwi-Facebook. Abantu abajonga ikhonkco baya kufuna ukuchofoza kuyo kwaye babone oko kuqukwayo. Into enhle nge-Facebook kukuba xa beyenjenjalo, abahlobo babo baya kubona le nyathelo kwaye bafuna ukukhafaza kuyo. Qhubeka ubuyekeze umxholo kwisayithi ngokwabelana ngamanqaku amaphepha kunye namaphepha ukuze ugcine ukuhamba rhoqo kwendlela yewebhu . Ukudala iphepha lebhizinisi kwi-Facebook kwakhona likhululekile.
# 4. Njalo qiniseka ukuba umxholo owenziwe ngowomgangatho kwaye uyifaka kwiinqununu zecandelo elithandwayo. Kwibhokisi yebhokisi ye-bio, faka idilesi yewebhu ukuze abasebenzisi banokuyityelela ukuba bayayithanda umxholo onikeziwe. Kwakhona kufuneka kudibene nenkonzo enikezelwayo..
# 5. Yabelana nge-URL yewebhu kunye nabalandeli bakho kwi-Twitter. Okwangoku, i-Twitter iqhosha phezulu njengeyona ndawo isetyenzisiweyo. Kuyo, abantu banokuthumela imilayezo ngendlela yeetweets kubalandeli babo. Inamandla amakhulu xa isetyenziswe ngokufanelekileyo. Kukho ukhetho lokufaka iinkcukacha zeqhosha loluntu apho abasebenzisi bangabelana ngqo nomxholo kwezinye iisayithi ezifana ne-Facebook njalo njalo.
# 6. Yiza ngemifanekiso yokudala uze uyiposise kwisayithi lakho. Abasebenzisi abafumana imifanekiso ehlawulelwayo bayabelana nabo kumasayithi afana nePinterest. Kuqiqile ukuba nemifanekiso ekwabelwana ngayo kwiplatifomu enjalo njengendawo ye-media yoluntu ephezulu-phambili yokwabelana ngemifanekiso. Isebenza ngokufana ne-Facebook kunye ne-Twitter, kwaye ngenxa yokufikelela kwayo ebanzi, isebenza njengomthombo omuhle wendlela ye-website njengoko abantu abajonga umfanekiso bafuna ukuwabelana nabo nabahlobo babo.
# 7. Thumela iwebhsayithi ukukhawuleza ngamaphepha e-Yellow kunye neenkcukacha zendawo. Khangela izintlu ezidumileyo kwindawo yokusebenza okanye ilizwe. Ukuba abantu balapho baqhuba umbuzo ohambelana nento ethi lewebhu linikezela, kukho amathuba amakhulu okuza kubuya njengenxalenye yeziphumo.
# 8. Qinisekisa ukuba isayithi ivela kwicandelo elongezelelweyo leentengiso. Kule mihlaba, yonke umninimfuno kufuneka enze ukuthumela isikhangiso, ngencazelo ecacileyo, ungalibali ukufaka i-URL. Xa abathengi banokutyelela ezi zizaziso ezidumile, bayakufumana ithuba lokukhangela isikhangiso, kwaye ukuba inkcazo ibandakanyeka ngokwaneleyo, baya kutyelela indawo.
# 9. Yisebenzise umvuzo ngokuchofoza (PPC) iinkqubo. Yikhokhelo ehlawulwayo ithumela i-traffic kunye nesiqinisekiso sokuguqulwa. Yintoni eyenzekayo isayithi ibonakala njengoluhlu oluxhaswe ngenye yeenjini zokukhangela kwaye uhlaselwa xa abantu befuna amagama angundoqo.
# 10. Sebenzisa i-SEO. Inkqubo inceda ushishino ukuba lubekwe phezulu kwiinjongo zeejini zophando. Iziza ezilungileyo ziya kuba ne-URL yazo ezabelwana ngazo kuluntu. Ngaphambi kokuba uqalise i-SEO, qiniseka ukuba uhambelana nezikhokelo zeenjini zokukhangela.